Ny tambajotra hitan'i Apple izao dia manohana ireo kojakojan'ny antoko fahatelo | Vaovao IPhone
Luis Padilla | 07/04/2021 20:08 | Fitaovana IPhone, maro
Vao nanambara tamin'ny fanambarana an-gazety i Apple Ny tambajotra Fikarohana vaovao izay mifanaraka amin'ny kojakoja an'ny antoko fahatelo, ary ny mpanamboatra voalohany dia efa nanambara ny fitaovany mifanaraka amin'ny herinandro ho avy.
Ny fampiharana Search dia nanampy tamin'ny famerenana ireo iPhone very nandritra ny taona maro, ary tsikelikely dia nahazo fampiasa vaovao sy fitaovana mifanaraka aminy izy io, fa ao anatin'ny tontolo iainana Apple hatrany. Amin'izao fotoana izao miaraka amin'ireo kojakoja vaovao an'ny antoko fahatelo dia mety hampitomboina ny tambajotra Fikarohana.
Nandritra ny folo taona mahery, niantehitra tamin'ny Find My ny mpanjifanay mba hahitana ireo fitaovana Apple very na nangalariny, nandritra ny fiarovana ny fiainany manokana. Izahay izao dia mitondra ny fahafaha-mikaroka mafimafy ao amin'ny Find My, iray amin'ireo serivisinay malaza indrindra, ho an'ny olona marobe miaraka amin'ny programa Find My network accessories. Faly izahay mahita ny fomba ampiasain'i Belkin, Chipolo, ary VanMoof an'ity teknolojia ity, ary tsy afaka miandry izahay mahita izay noforonin'ny mpiara-miasa hafa.
Ity programa vaovao ho an'ny mpanamboatra antoko fahatelo ity dia ao anatin'ny "Made for iPhone" (MFi). Ny vokatra rehetra dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny fepetra arovan'ny Apple sy ny fepetra momba azy manokana. Ireo lahatsoratra voamarina amin'ny MFi ireo dia azo ampiana avy amin'ny tabilao "Objects". ary hanana ny mari-pamantarana manamarina ny fifanarahan'izy ireo izy ireo. Ireo fitaovana ireo dia mety hampiasa ny chip an'ny Apple U1, ka ny toerana ao anatin'ny fampiharana Search dia marimarina kokoa.
Ny bisikileta elektrika S3 sy X3 farany avy Vanmoof, ny headphones Wireless Wireless SOUNDFORM avy any Belkin ary ny mahita ny lahatsoratra Chipolo ONE Spot no fitaovana voalohany hanohana ity tambajotram-pikarohana antoko fahatelo ity. Nanamafy i Apple fa hisy mpanamboatra vaovao hanatevin-daharana ny tambajotra Search. Ity tambajotra ity dia hovolavolain'ireo fitaovana Apple an-tapitrisany izay hanampy amin'ny alàlan'ny anarana tsy fantatra anarana sy iaraha-miasa hanampy ireo toerana mifanentana ireo, na dia lavitra aza ny iPhone an'ny endrika. Ny tsiambaratelo an'ity rafitra ity dia azo antoka amin'ny alàlan'ny énkripsi end-to-end, mba tsy ho fantatry ny Apple na ny mpanamboatra ny toerana misy an'ireo fitaovana ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fitaovana IPhone » Ny tamba-jotra Apple's Find dia mifanaraka amin'ny kojakoja fahatelo
Raha hiankina amin'ny U1 Chip ny tamba-jotra Search, dia azoko tsara ny fahataran'ireo avy ao Cupertino tamin'ny fandefasana ny Airtags ary mamela fotoana hanomezana ireo fitaovana (iPhone 11 sy 12 miaraka amin'ireo karazany rehetra) hahitana ny mpanaraka. Amin'ny farany dia hitovy amin'ny an'ny Samsung izy… Tsy hitako hoe tena ilaina androany izy io.
'Apple Support' dia manamora ny fahitana ny fiantohana sy ny fandrakofana ny vokatra